🥇 ▷ Sirta Apple Watch Series 5 - xusuusta, qiimaha iyo isku darka kiiska leh xargaha dhexdaada ✅
Sirta Apple Watch Series 5 – xusuusta, qiimaha iyo isku darka kiiska leh xargaha dhexdaada
Apple Watch Series 5 ayaa lagaga dhawaaqay shir sannadeedka Applein muuqaalka kama duwana Apple Watch Series 4. Si kastaba ha noqotee, sheekada cusubi waxay leedahay dhowr muhiim, laakiin ma ahan hal abuur cusub.
Xusuus dheeri ah
Waxay soo baxday Apple Watch Series 5 wuxuu la imanayaa 32 GB oo ah xusuusta gudaha, taas oo laba jibaar ka badan taxanaha 4 (16 GB). Kani waa casriyeyn fiican, maadaama aad laba jeer ka heshid xusuusta isla qiimaha isla moodalkii sanadkii la soo dhaafay. 32 GB oo xusuusta ah ayaa helay sida nooca Apple Watch Series 5 oo leh GPS, iyo ikhtiyaarka oo leh GPS + Cellular.
Sidoo kale maanta, qiimaha dhammaan xulashooyinka ayaa noqday mid la yaqaan. Taxanaha Apple Watch 5. Qiimaha cusub ee kiimikada aluminiumku waa $ 399, qiimaha nooca birta ah (midabbo: dahab, qalin iyo madow) – laga bilaabo $ 700, nooca titanium (qalin, madow) – laga bilaabo $ 800, iyo nooca dhoobada ah (oo kaliya caddaan ah) waxay ku kici doontaa $ 1300.
Adeegga Apple Watch Studio
Isla mar ahaantaana ogeysiiska Apple Watch Series 5, Apple wuxuu bilaabay adeegga Apple Watch Studio, kaas oo macaamiisha siiya fursad ay ku doortaan iskudhafka doorbida ee kiisaska iyo suunka si loo abuuro nooc shaqsi ah oo saacad smart ah.
Adeegsiga istiraatijiyadaha cusub ee khadka tooska ah ee Apple Waxaad saadlan kartaa sida kani ama iskudhafkaas u ekaanayo Markuu isticmaalegu doorto, waxaa lagama maarmaan ah inaad riixdo batoonka “Waan dhammeeyay” muujinta, xulo cabirka qadarka saacadda, nooca leh isgaarsiinta mobilada, oo amar saar.
Waxaa xusid mudan in Apple Watch Studio kuu ogolaaneyso inaad doorato iskudarka la doonayo ee kiiska iyo suunka kaliya ee loogu talagalay Apple Watch Series 5. Apple Apple Series Series 3 qaabkan lama taageerin. Ka faa’iidayso Apple Watch Studio waxaa laga heli karaa apple.com iyo app-ka Apple Store Adeeggu kama shaqeeyo gobollada oo dhan.